Nhau - Mhemberero yemubairo wevashandi vakakurumbira muna Ndira 27, 2021
Mhemberero yemubairo wevashandi vakakurumbira paJan 27th, 2021
Mhemberero yemubairo wevashandi vane hunyanzvi mu2020 yakaitwa zuro masikati muPerfect Display. Yakabatwa neyechipiri wave we COVID-19. Vese vatinoshanda navo vakaungana padenga reimba muna 15F kuti vatore chikamu mumhemberero yegore negore yevashandi vane mukurumbira Musangano uyu waitungamirwa naChen Fang wepakati pehutongi.
Vakati, mugore rinoshamisa ra2020, vese vatinoshanda navo vakakunda matambudziko uye vakaita zvibodzwa zvinogutsa, zvinova mukubatana kwevashandi vedu vese. Vashandi vanhasi vanongomiririra. Ivo vane zvakajairika hunhu: ivo vanoona basa sebasa ravo uye vanoteedzera kugona. Kunyangwe mumabasa akajairika, vanozvikumbira nematanho epamusoro. Ivo vane hanya nekambani, yakazvipira uye inoda kupa.
Chen Fang akataura: vashandi vanopa chinyararire ndivo musana webasa rekuvandudza; Iwo Mapiyona ekuvandudza uye kusimudzira, ivo vanovhura misika yemhiri kwemakungwa, vanotungamira maitiro, uye voita kuti rive rakakurumbira pasirese; Hutungamiri hwekurwa zvakaoma, vanogadzirisa zvine mutsindo, uye vanowedzera mari uye vanoderedza zvinoshandiswa.Vashandi vedu vane hunhu hwakanaka kwazvo havasi ivo chete vekumanikidza kwekukurumidza kukura, asi zvakare varapi uye vagara nhaka yemaitiro ebhizinesi!
Pakupera kwemusangano, Sachigaro Mr. Akaita hurukuro yekupedzisa:
1. Vakanaka mushandi mumiriri wechikwata chedu chakanakisa.
2.Gadzira yekutengesa tarisiro uye zvakaburitswa muna 2021, uye kambani ichaenderera ichichengetedza yegore yekukura mwero weinenge 50%. Shevedzai vashandi vese kuti varambe vachishanda nesimba.
3. Tevera chikumbiro chehurumende, tsigira kuti usadzokere kumusha kwegore idzva kunze kwekunge zvakakodzera. Iyo kambani ichapa mazana mashanu ema Yuan kune vamwe vashandi vanogara muSenzhen, uye vanopedza rakasiyana gore idzva navo.